उपराष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्न नमानेको अस्पतालमा नक्कली डाक्टर – Health Post Nepal
उपराष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्न नमानेको अस्पतालमा नक्कली डाक्टर
२०७६ फागुन ३० गते २०:००
वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालनमा रहेको शुभलक्ष्मी कलेज अफ हेल्थ साइन्स अस्पतालका सञ्चालक दीपेन्द्र काफ्लेलाई प्रहरीले बिहीबार जिल्ला अदालत सुर्खेतसमक्ष पेस गर्यो । काफ्लेले अरु कसैको मेडिकल काउन्सिलको कागजपत्रमा आफ्नो नाम राखी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका थिए । यसका साथै आफूलाई डाक्टर बताउँदै उनी अस्पतालमा आएका बिरामीको उपचारमा समेत संलग्न रहेकाले प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
अर्कै डाक्टरको कागजपत्रमा आफ्नो नाम
काफ्लेले अनुमतिविनै २०३८८ नम्बरको मेडिकल काउन्सिलको नक्कली अनुमतिपत्र प्रयोग गर्दै आएका थिए । उनले प्रयोग गरेको अनुमतिपत्र भने अरु कसैको नाममा दर्ता छ । काफ्लेविरुद्ध ठगीसँगै आपराधिक तथा कागजात किर्तेलगायतका कसुरमा मुद्दा चलाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक रवि रावलले जानकारी दिए ।
काफ्लेले अस्पताल सञ्चालनका समयमा कागजपत्र पेस किर्ते कागजात बनाएका हुन् । बिरामी जाँच गर्न आवश्यक पर्ने अन्य डाक्टरको मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्रमा उनले आफ्नो नाम राखेर नक्कली कागजपत्र तयार गरे । स्रोतका अनुसार उक्त नम्बरको कागजपत्र भएका सक्कली डाक्टर सेती अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत छन् ।
प्रजनन स्वास्थ्य चिकित्सक
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ मा रहेको काफ्लेको अस्पतालमा उनको नाम विशषेज्ञ डाक्टरको रूपमा पोतिएको छ, ‘डा. दीपेन्द्र काफ्ले, एमबिबिएस सियु’, ‘फेलोसिप–इन्डिया इन आइभिएफ, एनएमसी नं. २०३८८’ । उनले आफूले बंगलादेशको बिजिसी ट्रस्टबाट एमबिबिएस अध्ययन गरेको प्रहरीलाई बताएका छन् । अस्पतालको भित्तामा पोतिएको उनको सूचना हेर्दा उनले भारतबाट प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिमसमेत लिएको देखिन्छ ।
प्रजनन स्वास्थ्य विषयक ‘इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन’का लागि भारतमा धेरै कलेज छन् । एक महिनादेखि एक वर्षसम्मको समयावधिमा यस विषयमा तालिम लिन पाइन्छ । ‘इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन’मा पुरुषको भ्रूण वैज्ञानिक रूपमा महिलाको डिम्बमा स्थानान्तरण विषयक अध्ययन हुन्छ । सहज रूपमा बुझ्नुपर्दा सन्तान प्राप्तिका लागि ‘कोष भाडा’मा लिने–दिने प्रक्रियामा यस्ता चिकित्सक आवश्यक हुन्छन् । उनीहरू प्रजनन स्वास्थ्य विषयका जानकार मानिन्छन् ।
यस विषयमा भने काफ्लेले मुख्य चिकित्सकसम्बन्धी अध्ययन गरेका हुन् या सहायक चिकित्सकबारे भन्ने विषय हालसम्म पुष्टि भएको छैन । तर, अस्पताल सञ्चालनको कागजी प्रक्रिया र अस्पतालबाहिर लेखिएको नाममा भने उनले आफूलाई चिकित्सकको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
कसरी पक्राउ परे काफ्ले
काफ्लेले नक्कली एनएमसी प्रयोग गरेर अस्पताल सञ्चालन र बिरामी चेकजाँच गरिरहेको बताउँदै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई)लाई पत्राचार गरेको थियो । काउन्सिलको पत्र पाएलगत्तै सिबिआईले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो ।
नक्कली डाक्टर काफ्लेको अस्पताल उद्घाटनमा रोकिएका थिए उपराष्ट्रपति
चिकित्सकको किर्ते कागजपत्र बनाएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–८ मा शुभलक्ष्मी कलेज अफ हेल्थ अस्पताल प्रालि सञ्चालनमा ल्याएका दीपेन्द्र काफ्ले अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् ।
७ कात्तिकदेखि अस्पतालको औपचारिक सेवा सुरु गरेका काफ्लेले अस्पतालको उद्घाटनमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई बोलाएका थिए ।
उपराष्ट्रपति सुर्खेत आउने भएपछि सुर्खेत विमानस्थलदेखि अस्पतालसम्मको सडकमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति भयो । सडकमा यातायातका साधनसमेत व्यवस्थित गरियो ।
कार्यक्रमस्थलमा नागरिकको उपस्थिति पनि बढ्दो क्रममै थियो । मेटल डिटेक्टर लिएका सुरक्षाकर्मीले कार्यक्रमस्थल आउने नागरिकलाई सोधपुछ गरिरहेका थिए । कार्यक्रम ११ बजे नै सुरु हुने बताइए पनि उपराष्ट्रपति वीरेन्द्रनगरमा रहेको शुभ होटेलमा बिहानीको खाना खान विमानस्थलबाट सोझै उता गएपछि कार्यक्रम केही समय ढिला हुने जानकारी आयोजकले दिए ।
नागरिक व्यग्र प्रतीक्षामा थिए । उपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीसँग नेपाली सेनासमेत खटिएको थियो । कार्यक्रमस्थलवरपर नेपाल प्रहरी तैनाथ अवस्थामा थिए भने केही किलोमिटरको दूरीमा नेपाली सेनासमेत सुरक्षामा खटिएको थियो ।
बिहानी खानाका लागि उपराष्ट्रपतिलाई समय लाग्ने जनाएको आयोजकले दिउँसो १ बजे अस्पतालको उद्घाटन हुने सबैलाई जानकारी गराए । साथै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजनामा सुर्खेतका पर्यटकीयस्थल बुलबुले उद्यान र काँक्रेविहार क्षेत्रमा उपराष्ट्रपतिलाई भ्रमणमा लगिएको गाइँगुइँ हल्ला कार्यक्रमस्थलमा चल्न थाल्यो ।
पूर्वनिर्धारित उद्घाटन कार्यक्रममा नआएर उपराष्ट्रपति वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पदाधिकारीसँग घुम्न निस्किएपछि कार्यक्रममा उपस्थित नागरिकमाझ अनेकन शंका–उपशंका चल्न थाले । उद्घाटनको अघिल्लो दिन बुधबारदेखि नै कार्यक्रमस्थलमा रातभर सुरक्षा दिएका सुरक्षाकर्मी उपराष्ट्रपति नआउने भएपछि फर्किए ।
अन्तमा उपराष्ट्रपति उद्घाटनमा नआउने नै भएपछि आयोजकले एक वृद्ध व्यक्तिबाट अस्पतालको उद्घाटन गराएको थियो ।
मन्त्रालयले नै रोकेको थियो उद्घाटन
सुर्खेत पुगेका उपराष्ट्रपति पुनलाई एकाएक उक्त अस्पतालले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको परामर्शमा प्रदेश सरकारले उद्घाटन कार्यक्रममा नजान सुझाएको थियो ।
मन्त्रालयले ५ कात्तिकमै अस्पताल सञ्चालनको अस्थायी अनुमतिपत्र दिए पनि अन्तमा त्यसमा त्रुटि रहेको र विवादित हुने बताउँदै उपराष्ट्रपतिलाई अस्पताल उद्घाटनमा नजान सुझाब दिएको थियो ।
Tags: नक्कली डाक्टर, शुभलक्ष्मी कलेज अफ हेल्थ साइन्स